डा. सुरेश आचार्यः पत्रकार अधिवेशनका कमान्डर पत्रकार « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
डा. सुरेश आचार्यः पत्रकार अधिवेशनका कमान्डर पत्रकार
यसरी भयो पत्रकारितामा प्रवेश:
त्यो बेला विद्यालयमा असार साउनमा लामो बिदा हुन्थ्यो । बिदाकै बेला दाजुले मलाई जागिर लगाइदिने भनेर काठमाडौँ बोलाउनुभयो । घरपरिवारले मलाई राजनीतिमा लागेर बिग्रन्छ भन्ने लागेको रहेछ । परिवारकै आग्रहमा उहाँले मलाई काठमाडाँै बोलाउनुभएको रहेछ । घरपरिवारको चाहना म धेरै पढौँ लेखौ । जागिर खाएर ठूलो मान्छे बनौँ भन्ने रहेछ । यसैले मलाई राजनीतिबाट छुटाउन दाजुले देशान्तर साप्ताहिकमा रिर्पोटरको जागिर लगकाइदिनुभयो । उहाँहरुलाई डर थियो म राजनीतिमा लागेर बिग्रन्छु भनेर । देशान्तरको रिर्पोटर त भएँ तर मैले कुनै तालिम लिएको थिएन । नत पत्रकारिता नै बुझेको थिएँ । समाचारको तथ्य र समाचार लेखनबारे मलाई कुनै ज्ञान थिएन । सम्पादक किशोर नेपाल थिए । उनले चुँगीकरबारे अदालतले गरेको फैसलाको समाचार लेख्ने काम दिए । कुनै समाचार नै नलेखी अदालतको समाचार लेख्न सक्ने कुरै भएन ।
दस चोटी फैसला पढे तर कानुनी भाषा बुझ्नै सकिनँ । तर पनि अह्राएको काम गर्नै पर्यो । नौ चोटिसम्म घोरिएर समाचार लेखेर सम्पादकलाई देखाएँ । सम्पादकले सबै च्यातिदिए– ‘यसरी पनि समाचार लेखिन्छ भन्दै । त्यो बेला लेखाई नमिले च्यातेर फाल्ने गरिन्थ्यो । दस चोटिमा चाहिँ किन हो सम्पादक किशोर नेपालले आफै सच्याएर समाचार बनाएर छापिदिए । देशान्तरमा काम गर्दागर्दै मैले एनपीआई र आईपीएसबाट पत्रकारिता तालिम लिएँ । २०४४ तिर होला जर्मनीको बर्लिनमा भएको तीन महिने डेभलोपमेन्ट जर्नालिज्म तालिममा सहभागी हुने अवसर पनि पाएँ । त्यसले मलाई पत्रकारितामा लाग्न थप उत्प्रेरणा दियो । त्यसपछि मैले आफ्नो पेसासँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै गए । पञ्चायतकालको त्यो बेला देशान्तर साप्ताहिक काङ्ग्रेसीहरुको पत्रिका भनेर चर्चित थियो । यसैले पञ्चायती प्रशासकहरुले खुवै दुःख दिन्थे । धेरै चाेिट पत्रिका बन्द गराउन प्रयास गरेका थिए । तर सकेका थिएनन् । भारतीय नेता चन्द्रशेखरले बोलेको कुरा छापेपछि अर्को अङ्क निकाल्न दिइएन । मलाई २०४६ मा त्यो पत्रिकामा काम गरेकै कारण पक्राउ गरेर४६ दिन थुनामा राखियो ।
प्रस्तुति : गणेश लम्साल @Ratopati